13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 Chris Wharfe 367 Views စာ0မှတ်ချက် 10272 Old Trafford - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်, ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona, 40485 FC Barcelona အခမ်းအနား, ဘာစီလိုနာ, စခန်း Nou, FC အသင်းဘာစီလိုနာ, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူလက်ဆောင်, GWP, Lego, ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ Lego လက်ဆောင်ပေးမယ်, Lego GWP, LEGO.com, မန်ချက်စတာယူနိက်တက်, အဆိုပါ LEGO Group
အဆိုပါ Lego Group သည်ပရိုမိုးရှင်းကာလကိုထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်ပါသည် 40485 FC Barcelona အခမ်းအနားအသစ်ထွက်ရှိသည့်လက်ဆောင်နှင့်တွဲထားသော ၀ ယ်ယူမှု ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona.
မူလကမနေ့ကအဆုံးသတ်ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၁၇၈- ကွက်သတ်မှတ်အရည်အချင်းစစ် ၀ င်ပေါက်ကအခုအောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်အထိကုန်ဆုံးလိမ့်မယ်။ ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelonaမရ။ ၎င်းသည်ယခုပွဲစဉ်များအတွက်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသောဒုတိယဘောလုံးကွင်းဖြစ်သည် Lego မနှစ်ကနောက်လိုက်အုပ်စု ၁၀၂၇၂ အိုးထရက်ဖို့ဒ် - မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်.
အပိုင်းသစ် ၅,၅၀၉ ပါ microscale set တွင်မည်သည့် minifigures မှမပါ ၀ င်ပါကငါးခုတွေ့ရလိမ့်မည် 40485 FC Barcelona အခမ်းအနားအားလုံးကိုကလပ်အင်္ကျီများဖြင့် ၀ တ်ထားသည်။ ၁၈+ ပြသမှုပုံစံသည်ဘာစီလိုနာရှိ La Rambla တစ်လျှောက်တည်ရှိသောအထင်ကရ Font de Canaletes (Canaletas Fountain) ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးသမိုင်းဝင်ဘောလုံးအသင်းပရိသတ်များအတွက်အချက်အခြာကျသောနေရာအဖြစ်လူသိများသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ GWP အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည် အသေးစိတ်သုံးသပ်မှုမရ။ ဒီတစ်ခုရဲ့အထောက်အပံ့တွေကထင်တာထက်အများကြီးပိုများနေခဲ့တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ပိုကြီးတဲ့ဘာစီလိုနာအစုံရဲ့ရောင်းအားကမနှစ်ကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လက်ဆောင်အဖြစ်မျှော်လင့်ထားသလောက်မရခဲ့ပါဘူး။ 10272 ဟောငျး Trafford ချက်ချင်းနီးပါးရောင်းထွက်သွားသည်။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်ယခုဖမ်းယူရန်တစ်လသာရှိသေးသည် 40485 FC Barcelona အခမ်းအနားအောက်တိုဘာလ ၁၀ မတိုင်မီကောင်းကောင်းမနေနိုင်သည့်စတော့ရှယ်ယာများနောက်ဆုံးသိုလှောင်နေစဉ် ၁၀၂၈၄ Camp Nou - FC Barcelona ကိုယခုတွင်ရနိုင်သည် LEGO.com နှင့် Lego စတိုးဆိုင်များ။ အားကစားကွင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးသပ်ချက်အပြည့်အစုံကိုဖတ်ပါ ဒီမှာ.
← LEGO Overwatch သည် p အဖြစ်ပြန်လာနိုင်သည်art LEGO Gaming theme အသစ်၏
LEGO Harry Potter 30628 Monster Book of Monsters GWP ပြန်လာပါပြီ →